मायामा शंका बारम्बार हुन्छ !	श्रावण १, जुलाई १७ – शनिबार छैठौ दिन
उसैपनि शनिबार । प्राय बिदा र रमाईलोमा बित्ने दिन हो यो । तर म बैचैन छु जहाँ तिम्रो यादहरु मलाई फिटिक्कै रमाइलो गर्न दिँदैनन् न त बिदाको आभाष गर्न दिन्छन् । यो मायाको यथार्थ पाटो पनि हो किनभने जब कोही प्रेममा पर्छन् त्यो दिनबाट सबैको निद्रा र समयसँग गुनासो गर्छन् ।
प्रेमलापमा व्यस्त जोडीले कति चाँडै घण्टौं बिताउँछ र फर्किएर जानु पर्दाको समयमा समयलाई गाली गर्छन् । केही पल अझ लम्बिएको भए । तर म पनि चाहन्न यस्तो होस् । मलाई समयसँग कुनै गुनासो र पीडा पोख्नु छैन । यसकारण पनि किनभने मेरो आत्मा मेरो नजिकै छैन उनी दुर छन् । उनीसँग मन साट्न समय नपुगेको भन्दै समयलाई कहिले दोष दिएको पनि त छैन मैलै ।
आइना कुछ खबर मेरे यार की । एक साताको संघारमा आइपुग्दा म जल्न थालेको छु । मायाको अभाव र मनका खुशीहरु गुम्सिन थालेको छ । उफ् ॥ यस्तो मायाको डोरीमा कसिलो भएर बाँधिएको मायामा फेरि शंका उठ्यो । उनको सम्बादमा मैलै भित्रैबाट अविश्वासको संकेत दिएको महसुस भयो । मन दुख्यो आखिर यही हो विश्वासको फल ।
आभार, २०१० को यस्तो भयो ! ’2010 in review’ « शहरबाट शब्दहरु Says:	जनवरी 2, 2011 at 5:42 बिहान […] The busiest day of the year was July 18th with 47 views. The most popular post that day was मायामा शंका बारम्बार हुन्छ !. […]
जवाफ फर्काउनुहोस् yogen Says:	जुन 18, 2011 at 5:20 बिहान touch my heart!!!!! realy